कसले तोक्ने सहकारीको ब्याज दर ? राष्ट्र बैंकले दियो यस्तो जवाफ - Everest Dainik - News from Nepal
कसले तोक्ने सहकारीको ब्याज दर ? राष्ट्र बैंकले दियो यस्तो जवाफ
काठमाडौं, वित्तिय कारोबार समेत गर्ने सहकारीको ब्याज दर कसले तोक्ने भन्ने विषय अझै विवादित नै छ ।
यसैबीच राष्ट्र बैंकले भने कानुनतः सहकारीको व्याजदर राष्ट्र बैंकले तोक्न नमिल्ने बताएको छ । खुला बजार अर्थनीतिलाई नेपालले आत्मसात् गरेकाले ब्याजदर तोक्न नमिल्ने उसको भनाइ छ।
त्यसो भए कसले तोक्ने त सहकारीको ब्याज ? अहिले यो प्रश्न अन्यौल नै छ ।
नेपालमा वित्तिय कारोबार गर्ने सयौं सहकारी छन् र सहकारीपिच्छे व्याजदर समेत फरक छ । संविधानमा सहकारीलाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राख्ने भनिएपनि प्रकृया सुरु भएको छैन । सहकारी क्षेत्रको नियामककारी निकाय सहकारी विभाग कानुनी ढंगबाटै कम्जोर देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारी नविन्द्र विष्टले ब्याज र ऋणको अन्तर ९स्प्रेड० दरबाहेक किटान गरेर सहकारी संस्थाका लागि ब्याजदर निश्चित गर्न नसकिने बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ८ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकका लागि ४।४ प्रतिशत स्प्रेड दर तोकेको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष राष्ट्र बैंकले ०।६ प्रतिशत बिन्दुले स्प्रेड दर घटाएको हो। गत वर्षको स्प्रेड दर पाँच प्रतिशत थियो।
याे पनि पढ्नुस खुशीको खबर ! अब जुनसुकै बैंकबाट निक्षेप जम्मा गर्न सकिने
याे पनि पढ्नुस अब सहकारीले साढे १६ % बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाउने
ट्याग्स: नेपाल राष्ट बैंक, सहकारी ब्याज दर